Al-Sisi oo aqoosiga ka guddoomay danjiraha Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Ilyaas Sheekh Cumar Abuubakar oo ah danjire ay dhawaan Dowladda Soomaaliya u magaacawday dalka Masar ayaa laga guddoomay waraaqaha aqonsiga.
QAAHIRA, Masar - Madaxweynaha dalka Masar Cabdititaax Al-Sisi ayaa waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay Safiirka cusub ee Soomaaliya u qaabilsan dalka Masar Ilyaas Sheekh Cumar Abuubakar.
Dowladda Soomaaliya ayaa danjire Ilyaas Sheekh Cumar u magacaawday safiirka Masar billowgii sanadkaan, halka Masar ay aqbashay magacaabiddan bishii la soo dhaafay ee Febaraayo, waxaana hadda laga guddoomay waraaqaha aqoonsiga.
Kadib madmadow soo kala dhex galay Labada dowlad, safaaradda Soomaaliya ee Masar ayaa haawneysay labadii sano ee la soo dhaafay, waxayna hadda u muuqataa inuu dib u soo hagaaagayo xiriirka labada dhinac.
Masar waxaa loo tix galiyaa mid ka mid ah waddamada xiriirka ugu qotoda dheer la leh Soomaaliya, waxayna dhinacyo kala duwan ka caawisay Dowladihii kala danbeeyay ee dalka soo maary.
Farmaajo oo si indho la’aan ah xiriir iyo is xulafeysi ula abuuratay Itoobiya ayaa xagal-daaciyay xiriirkii soo jireen ka ahaa ee Masar, wuxuuna dhowr jeer qadiyadda muranka biyaha ee ka dhexeysa Itoobiya iyo Masar uu la jirsaday Itooboya.